बर्षमा एक खर्बभन्दा बढी ठग्छन् यातायात व्यवसायी » खबरहरुको एउटै केन्द्र
शुक्रबार, बैशाख ७, २०७५ ०७:१० मा प्रकाशित !
काठमाडौं – यातायात व्यवस्था समितिमा गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा दर्ता भएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छली गर्दै आएका छन् । व्यवसायीले कर छलीबाहेक उपभोक्ताबाट वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरिरहेको यातायात व्यवस्था विभाग महानिर्देशक रूपनाराण भट्टराईको दाबी छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टको पहिलो पृष्ठमा यो समाचार छापिएको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: आजको दिन कस्तो छ हेर्नुस आजको राशिफल
NEXT POST Next post: चिनियाँ बुद्धिजिवी भन्छन् – ‘एमाले-माओवादी एकता चाँडै होस्’
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शुक्रबार, बैशाख ७, २०७५ ०७:१०
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शुक्रबार, बैशाख ७, २०७५ ०७:१०
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शुक्रबार, बैशाख ७, २०७५ ०७:१०
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शुक्रबार, बैशाख ७, २०७५ ०७:१०
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शुक्रबार, बैशाख ७, २०७५ ०७:१०